トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Horukon Works
Haddii aadan si fiican u ogahay, qowladda pachinko in Horukon this la, waxa ay u muuqataa dadka qaar ka mid ah ayaa loo maleynayaa in ay sharci-darro ah, sida fog, asalka ah ma aha mashiin in wax caynkaas ah. Horukon The, waa soo gaabiyay ee computer Hol. Isagoo ka hadlayay of
waxa la sameeyo mashiinka oo ka mid ah, waxaa jira labo ujeeddo xun ugu qaybsan. Iyo in soo nuugo ilaa by aggregating miiska xogta, sida iibka iyo faa'iido guud iyo rakibida, waxay kor ugu tegayaa socodka khiyaamada. Marka la soo koobo, Horukon The, waxay noqon doontaa xaqiiqda ah in mashiinka a in maamusha xogta. First of dhan, waa xogta, mishiinka maxaa yeelay waxa ay kor u nuugo xogta si Horukon ayaa lagu rakibay on mid ka mid ah madal kaliya. taararka soo jiid oo ka
taagan, waa hab in soo kor xogta by taas oo in ay ku xidhmaan mishiinka. Kaalay xogta waa in kor, iyo iibka iyo faa'iido guud miis kasta, tirada wadidda in ay, xogta looga baahan yahay ganacsiga, sida kubada qiimaha unit for iibka in kale, Horukon waxaa isagoo signal a miiska ka helay, waxaa la nuugo doonaa in-waqtiga dhabta ah .
ma ahan oo keliya mid ka mid ah xogta, xogta gaarka ah ama xogta iyo model of unit jasiiradda, waxa ay noqotay sida lagu arki karaa dukaamada dhan xogta.
Tan iyo xogta la soo to-waqtiga dhabta ah, dhibaato, sida marka uu jiro la'aan ah fiilooyinka ayaa sidoo kale waxa uu noqday suurtagal ah in si dhaqso ah isku aragto. data iibka noocan oo kale ah, marka la eego dhab fulinta ganacsiga, aad xogta doono lagama maarmaan.
in tirada this ku salaysan, waxaan qabaa ganacsiga ee sida maalinta socda musmaarrada hagaajin iyo goobaha. In warshadaha kale, waxaan u malaynayaa in haddii aanay jirin xog iibka maalinta ku xigta ee qorshaha ganacsiga aan la taagay, laakiin waxa ay si wadajir ah waa in qowladda pachinko ah. Marka
waxaa xogta lahayn, ganacsiga waa in aad awood u ma noqon doonto in at dhan. Sida ay yidhaahdaan
jidadka, ama xakamayn kartaa per ee Horukon, waxaa qoreysa nala mid si xor ah loo xakameeyo haddii aan Uchikome goolka iibka ku qalabeysan yahay.
※ Si kastaba ha ahaatee, Sidoo kale Maqlaan hadal ah tii pachinko sidoo kale inta badan isticmaalaan Horukon in waxay leeyihiin hawlaha sida. Waxaa la socday in ay qabsadaan for faa'iido ah ee xaqiiqda ah waa hab qabashada Horukon.